Isbitaal dadka Lacag La’aan Ku Daaweynaya Oo Laga Hirgaliyay Magaalada Ceelbuur – Calamada.com
Isbitaal dadka Lacag La’aan Ku Daaweynaya Oo Laga Hirgaliyay Magaalada Ceelbuur
calamada September 3, 2018 1 min read
Munaasabad ballaaran oo ay kasoo qeyb galeen mas’uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ayaa xarigga looga jiray isbitaal cusub oo ay magaaladu yeelanayso.
Afar sano kadib oo ay burbursanaayeen adeegyada bulshada Bulshada ee muhiimka ah ayaa hadda dib loo howlgeliyay adeegyada aas-aasiga u ah nolosha waxaana kamid ah caafimaadka.
Hay’adda Samafalka Al-ixsaan ayaa shalay xarigga ka jartay isbitaalka Ceelbuur oo ku burburay qabsashadii ciidamada Xabashida ee magaalada, isbitaalka lafuray ayaa dabooli doono baahiya caafimaad ee bulshada.
Dhaqaatiir hadallo ka jeediyay munaasabaddii isbitaalka lagu furayay ayaa soo bandhigay waxqabadka isbitaalka waxaana kamid ah in uu yeelanayo qeybo Bukaan socod,Bukaan Jiif,qalliin Sheybaar iyo qayb gaar u ah haweenka iyo dhallaanka.
Halkan ka degso Hadalladii laga Jeediyay Munaasabaddii isbitaalka Ceelbuur dib loogu furayay ama Hoos ka dhageyso.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.23-12-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 23-12-1439 Hijri.